गैह्राखोलामा सञ्चालिन भलिबल प्रतियोगितामा अहिलेसम्म कुन कुन टीमले खेल जिते ? हेर्नुहाेस् – KhabarTime
गैह्राखोलामा सञ्चालिन भलिबल प्रतियोगितामा अहिलेसम्म कुन कुन टीमले खेल जिते ? हेर्नुहाेस्
गैराखोलामा जारी भलिबल प्रतियोगितामा सहभागी टिमहरू मध्ये, पहिलो दिन आयोजक बि र खानीखोला खेलेको प्रतिस्पर्धामा ० /२ सेट नै खानीखोलाले हात पारेर बिजय हुन सफल भएको थियो । त्यस्तै लाफा ए र आयोजक सी बीचको खेलमा आयोजक सी टीमले २ सेट हात पार्दै निर्णायक खेल खेलेको थियो ।
त्यस्तै दोस्रो दिन रसखोला र पाल्पा शेर डाँडा बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा रसखोला टीमले दुबै सेट हात पारेर बिजय भएको थियो । भने सोहि दिन अर्को खेल आयोजक इ र पुर्कोटको बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त खेलमा पुर्कोट टीमले दुबै सेट जितेर बिजय भएको थियो ।
आज गैराखोलामा शुरू भएको भलिबल प्रतियोगितको तेश्रो दिन, भलिबल प्रतियोगितामा आजको पहिलो खेल बडरभन्ज्याङ् र आयोजक बिच भएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा बडरभञ्ज्याङले २ सेट नै जितेर सफलता हात पार्न सफल भएको थियो । त्यस्तै आजैको अर्को खेल ठाटी भन्ज्याङ्ग र रामपुर टीम बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा ठाटी भन्ज्याङ् टीमले २ सेट लगातार नै जितेर आफ्नो टीमलाई अगाडि बढाएको थियो ।
त्यस्तै आजको अन्तिम प्रतिस्पर्धा देउराली र तनहु टीम बिच भएको थियो । उक्त प्रतिस्पर्धामा दुबै सेट देउरालीले जितेर बिजय हात पारेका थिए ।
बिभिन्न कारणले आमन्त्रित टिमहरू समयमै आउन सफल नभएकाले भोलि १२ बजेसम्म प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाउन आफ्नो टिम दर्ता गरिने कुरा खेल संयोजक सागर मानन्धरले जानकारी दिनु भयो ।
एक कदम अगाडी ओली सरकार, पूर्वलडाकुसंग भयो यस्तो सहमति